Geofumeyaasha qaarkood - Geofumed
Qaar ka mid ah geofumadas gaaban
Mee, 2008 Cartografia, Google Earth / Maps, dalwaddii Earth
Vexcel, shirkad hoosaad ka ah Microsoft ayaa bixisa xogta Virtual Earth ee qad la'aanta ah. Xalkani wuxuu xaqiijinayaa inuu bixiyo xogta muuqaalka 3D iyo sawirro ka tayo wanaagsan kuwa laga arko internetka oo wuxuu ku jiri karaa intranet. khariidad inaad awood u leedahay inaad doorato magaalo, gobol, gobol iyo xitaa dhammaan caymiska adduunka.
Google wuxuu ku dhashay Geo Developers Blog, isbadallada ku dhacay Google Earth, oo hadda loo arki karo mashup, in API-ada lagu daro midka Khariidadaha Google, oo leh kml gudaha ka OCG… qormadii hore ee Google Earth API blog ayaa sidan loo magacaabay ka dib in kabadan laba sano oo tijaabo ah iyo qalad ah.
Argentina waxay sameysay rasmi ah Award Surveying National Waxaa loo qaban doonaa labadii sanaba mar in lagu sharfo Juan Abecián, sidii hab lagu dhiiri geliyo cilmi baarista sawir gacmeedka loona aqoonsado dadaalka loogu jiro hormarinta iyo faafinta aqoonta sawirada.
blog Google Earth KML egeomates My
Post Previous" Hore 175 miyaa malaayiin dad ah ayaa qaldan isla maalintaas?
Post Next Fasax lacag la'aan ah ee BaltimoreNext »